क्षुद्र ग्रहका कारण हालको अमेजन वनको उदय !
बीबीसी । डाइनोसरको अस्तित्व समाप्त गराएको क्षुद्र ग्रहका कारण हालको अमेजन वनको उदय भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनकर्ताहरुले जीवाश्म परागकण र पातहरुको नमुनालाई आधार मानेर उक्त घटनाले कसरी दक्षिण अमेरिकाको ‘ट्रोपिकल रेनफरेसट’लाई प्रभाव पार्‍यो भन्ने अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनकर्ताहरुले आफ्नो खोजको नतिजालाई ‘साइन्स’ जर्नलमा प्रकाशित गरेका छन् ।
करिब ६ करोड ६० लाख वर्षपहिले खसेको १२ किलोमिटर चौडाइ भएको उक्त उल्कापिण्डका कारण अमेजनमा पाइने वनस्पतिको प्रकारमा व्यापक परिवर्तन गरायो ।
“हाम्रो टिमले उक्त घटनाअघि र पछिका ५० हजार बढी जीवाश्म परागकण र ६ हजार बढी पातको जीवाश्म परीक्षण गर्‍यो,” पानामास्थित स्मिथोनियन ट्रपिकल रिसर्च इन्स्टिच्युटकी डा. मोनिका कार्भेलोले बताइन् ।
क्षुद्र ग्रह खस्नुअघि यस क्षेत्रमा कोनिफर्स (कोणधारी वनस्पति) र फर्न (उन्यु प्रकारका वनस्पति) धेरै पाइन्थे । तर, उक्त पिण्ड खसेपछि वनस्पतिको विविधतामा ४५ प्रतिशतले कमी आउनुको साथै धेरै बीजयुक्त वनस्पति लोप भए । त्यसको ६ करोड वर्षपछि हाल यो जंगलमा फूल फुल्ने वनस्पतिले प्रभुत्व कायम गरेको छ ।
क्षुद्र ग्रहका कारण ट्रपिकल वनको संरचनामा समेत परिवर्तन आयो । क्रेटेसियस पिरियडको अन्त्यतिर जब डाइनोसर जीवित नै थिए, त्यस बखत रुखहरु निकै फरक दूरीमा थिए । रुखका टुप्पाहरु एकापसमा जोडिएका थिएनन् । तर, उक्त घटनापछि रुखका टुप्पाहरु जोडिए र जमिनमा निकै कम मात्र प्रकाश छिर्ने भयो ।
त्यसो भए उक्त घटनाले डायनोसर युगमा कोणधारी वनस्पतिको प्रभुत्व रहेको वनलाई कसरी रंगीविरंगी फूलको प्रभुत्व रहेको वनमा परिवर्तन गर्‍यो त ? परागकण र पातहरुको अध्ययनको आधारमा अनुसन्धाताहरुले यस विषयमा तीन फरक स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
पहिलो, डाइनोसरले रुखको तल्लो भागमा उम्रने साना बिरुवा खाएर र कुल्चिएर वनलाई घना हुनबाट रोकेको हुनसक्छ । दोस्रो व्याख्या यो हो कि क्षुद्र ग्रह खसेपछि जलेर बाँकी खरानीले माटोलाई मलिलो बनायो, जसले फूल फुल्ने बिरुवालाई छिटो हुर्कन मद्दत मिल्यो । तेस्रो व्याख्या अनुसार कोणधारी प्रजाति लोप हुँदा फूल फुल्ने बिरुवालाई हुर्कने अवसर मिल्यो ।
अनुसन्धान टोलीका अनुसार यी व्याख्याहरु परस्पर अनन्य छैनन् । हामीले आज देखिरहेको नतिजामा यी सबैको भूमिका हुन पनि सक्छ ।